प्रधानमन्त्रीमाथि ढुङ्गा प्रहार, देशभर तरंग, के छ अबस्था ? — Imandarmedia.com
प्रधानमन्त्रीमाथि ढुङ्गा प्रहार, देशभर तरंग, के छ अबस्था ?
काठमाडौ। प्रदर्शनकारीहरूले प्रधानमन्त्रीमाथि ढुङ्गा प्रहार गरेका छन् । चुनावी अभियानमा जुटेका बेला ट्रुडोमाथि ढुङ्गा प्रहार भएको हो । तर उनलाई कुनै चोट भने लागेको छैन । यो घटना क्यानडाको हो । आफ्नो पार्टीको बहुमतको सरकार बनाउने आशा राखेर उनले केही दिन अघिमात्रै चुनाव घोषणा गरेका थिए ।
तर, कोभिड १९ खोपको अनिवार्यता र अन्य कडाइहरूका कारण अहिले क्यानडामा सरकार विरोधी प्रदर्शन चलिरहेको छ र टुडेले राम्ररी प्रचार गर्न पाएका छैनन् । एक साताअघिमात्रै आक्रोशित बनेका प्रदर्शनकारीहरुले एम्बुस बिछ्याएपछि टुडेले चुनावी र्याली स्थगित गरेका थिए।
अन्टारियोमा ढुङ्गा प्रहार भएको विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै उनले आफू घाइते नभएको बताएका छन् । उनले यस घटनालाई २०१६ को घटनासँग तुलना गरे । त्यतिबेला एक महिलाले उनलाई फर्सीले हानेकी थिइन् । विपक्षी पार्टीका नेता इरिन ओ टोलीले पनि यस घटनाको निन्दा गरेका छन् । ‘राजनीतिक हिंसा कहिल्यै सही हुन सक्दैन र दबाब, दुर्व्यवहार र हिंसाबाट हाम्रो मिडिया स्वतन्त्र हुनुपर्छ,’ उनले ट्वीट गरेका छन् ।
२० सेप्टेम्बरमा हुने चुनावअघि ट्रुडोको अनिवार्य खोप योजना प्रमुख मुद्दा बनेको छ । सबै सरकारी कामदारहरूले अक्टुबरको अन्त्यसम्म खोप लगाउनुपर्ने र खोप नलगाए जागिर खाने चेतावनी गत महिना सरकारले दिएको थियो । विश्वमा सर्वाधिक खोप लगाउने देशमध्ये क्यानडा एक हो ।
तसै गरि सन् २०१५ मा १३० जनाको ज्यान जाने गरी गरिएको पेरिस हमलासम्बन्धी मुद्दामाथि फ्रान्समा एउटा ऐतिहासिक सुनुवाइ शुरू भएको छ। इस्लामिक स्टेट आईएस समूहले गराएको हमला फ्रान्समा द्वितीय विश्वयुद्धयताकै सबैभन्दा नराम्रो भएको बताइन्छ।
आईएसका आ’क्र’मणकारीहरूले पेरिसमा गोली चलाउनुका साथै बम विस्फोट गराएका थिए। घटनामा बाँचेका एक मात्र आक्रमणकारी सलाह अब्देलसलाम अन्य १३ जना प्रतिवादीसहित सोही मुद्दाको सुनुवाइका लागि बनाइएको विशेष अदालत कक्षमा उपस्थित भएका छन्।
सुनुवाइका क्रममा अब्देलसलामले आफू त्यति बेला आईएस समूहको एक लडाकु भएको अदालत समक्ष बयान दिए। यो मुद्दाको सुनुवाइलाई आधुनिक फ्रान्सेली इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो भनिएको छ। आगामी नौ महिनाको अवधिमा १४० दिन सुनुवाइ हुनेछ जसमा ३३० जना वकिल र घटनामा बाँच्न सफल १,८०० व्यक्ति एवम्‌ पीडितका आफन्त सहभागी हुनेछन्।
घटनाको बेलाका फ्रान्सेली राष्ट्रपति फ्रान्स्वाँ ओलान्दसहित करिब तीन सयजना प्रत्यक्षदर्शीको बयान पनि लिइनेछ। सुनुवाइ शुरू हुनुअघि फ्रान्सेली सञ्चारमाध्यमसँग कुरा गर्दै पूर्वराष्ट्रपति ओलान्दले आक्रमणका पीडितहरूका निम्ति यो महत्त्वपूर्ण क्षण भएको बताए।
सन् २०१५ को नोभेम्बरमा आईएसले बाटाक्लाँ कन्सर्ट हल, एउटा महत्त्वपूर्ण रङ्गशाला, रेष्टुराँ तथा बारहरूमा आक्रमण गरेको स्वीकारेको थियो। कडा सुरक्षाबीच प्रहरीको गाडीमा सन्दिग्धहरूलाई बुधवार बिहान अदालत कक्षमा पुर्‍याइएको थियो। मुद्दाको सुनुवाइ शुरू हुनुअगाडि उनीहरू प्रतिवादी बस्ने स्थानमा मास्क लगाएर बसेका थिए।
सन् २०१६ मा बेल्जियममा पक्राउ गरिएयता अब्देलसलाम जेलमा छन्। अन्य १३ जना प्रतिवादीमा हमलाका लागि आर्थिक सहयोग गरेको तथा आ’क्र’मणको योजना बुनेको लगायत आरोप लागेका व्यक्ति रहेका छन्।
तस्तै चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले उत्तर कोरियाको ७३ औं वार्षिकोत्सवमा शुभकामना सन्देश पठाएका छन्। सीले सर्वोच्च नेता किम जोङ उनलाई पत्र लेख्दै उत्तर कोरियासँगको सम्बन्ध नयाँ उचाईमा पुर्‍याउने प्रतिज्ञा गरेको साउथ चाइना मर्निङ पोस्टले जनाएको छ।
सीले समाजवादी विचारधाराका कारण उत्तर कोरियाको विकास भइरहेको देख्दा आफूलाई खुशी लागेको पत्रमा उल्लेख गरेका छन्। सीले भनेका छन्,‘उत्तर कोरियाको स्थापनापछि गएको ७३ वर्षयता वर्कर्स पार्टीले समाजवादी कारणहरुलाई बढावा दिन निरन्तर प्रयास गर्दै महान उपलब्धिहरु हासिल गरेको छ।